IHerzing College - iBLI Isikole solimi eCanada
Izinhlelo zePathwayHerzing College
Indlela yakho eya eCanadaHerzing College
Kusukela ngo-1965 iHerzing College yaziwa njengomholi osezingeni eliphakeme, uqeqesho oluthembekile lwezinhlelo eziqhutshwa yimakethe. Ekuqaleni lesi sikhungo besizinikele ekuqeqeshweni kobuchwepheshe bamakhompyutha, kepha eminyakeni edlule, ikolishi selikhulise ububanzi bemfundo egxile emisebenzini futhi libuye landa ngokwendawo lifaka izindawo zekhempasi ezweni lonke.
Amakhampasi ayo asebenzisana kakhulu nabaqashi bendawo nabesifunda ukuqinisekisa ukuthi izinhlelo zeHerzing zibandakanya amakhono nolwazi oludingekayo ukuze abafundi baphumelele ezingeni elilandelayo. Umnyango weTravel Development Development uhlinzeka abafundi ngezinsizakusebenza zokuqeqesha nezokuqashwa abazidingayo ukuze bathole umsebenzi ngempumelelo.
I-Herzing inikeza usuku, ingxenye yosuku, amakilasi kusihlwa kanye ne-inthanethi ukuvumela abafundi ukuthi bakwazi ukuzivumelanisa nezimo ukufinyelela izinhloso zabo zemfundo ephakeme. UHerzing uzibophezele ekusizeni abafundi abavame ukulinganisa umsebenzi nokuzibophezela komndeni nezifundo zabo ngenkathi bezama ukuthuthukisa izimpilo zabo ngemfundo.
Herzing CollegeOlunye ulwazi
Izinga lesiNgisi le-BLI izinga 9 noma i-BLI French level 8 (i-BLI French level 6 yezinhlelo ze-DEP)
UKULANDELWA KWAMABHIZINISI | Izinyanga eziyi-14 (amahora angama-25 / isonto, kufaka ne-internship)
Iziqu ku-Business Administration zibonisa izindlela ezahlukahlukene zomsebenzi, kubandakanya; ezezimali / accounting, insizakalo yamakhasimende, ukuthengisa nokumaketha. Abantu kulendima ngokuvamile banesibopho sokusebenzisa amasistimu wokusebenza ajwayelekile ne-software ngezinjongo zokuphatha, ukuhlaziya nokucubungula idatha ye-accounting, ukumisa izinhlelo zokuthengisa, noma ukuthengisa imikhiqizo nezinsizakalo kumakhasimende.
Lolu hlelo luhlinzeka ngesibukezo esiyingqayizivele semigomo yebhizinisi, imisebenzi kanye nokusebenza kugxilwe ekuthuthukiseni amakhono okuphatha. Izindawo zokufunda zifaka imiqondo yezimali kanye nokusetshenziswa, imigomo yebhizinisi nokuphathwa, isoftware yebhizinisi lekhompyutha, ukumaketha, ukuthengisa namakhono wokuxhumana.
Lolu hlelo luhlinzekwa ngesiNgisi.
UKUTHUTHA KOMHLABA WONKE NOKUNGENISA NOKUTHENGISA | Izinyanga eziyi-14 (amahora angama-25 / isonto, kufaka phakathi i-8 week internship)
Ngomphakathi wethu womhlaba wonke owanda ngokushesha, kanye nentshisekelo ekhulayo nokuthembela ekuhwebeni komhlaba, imboni yokungenisa nokuthumela izinto kwamanye amazwe ayibanga ibaluleke kakhulu noma ibaluleke kakhulu emnothweni wezwe. Abantu abaqeqeshelwe ukungena / ukuthekelisa bazoba nemininingwane yemithethonqubo nemithetho elawula ukuhwebelana komhlaba, futhi bazokwazisa ezingxoxweni zamanje nezokuxoxisana kwemakethe yamazwe aphesheya.
Lolu hlelo lufundisa abafundi amakhono abalulekile anconywe yiForum for International Trade Training (FITT), ozohlinzeka wonke amathuluzi adingekayo ukuze ekugcineni abe yi-Certified International Trade Professional (CITP) Izindawo zokufunda zifaka ucwaningo ngebhizinisi lamanye amazwe, izici zomthetho zokuhweba kwamanye amazwe , umthetho nezindinganiso zebhizinisi, amaspredishithi kanye nemininingwane kanye nezibalo zezezimali.
ISIMEMO SE-3D | Izinyanga ezingama-24 (amahora angama-25 / isonto, kufaka ne-internship)
I-3D animation kuyinto entsha ethokozisayo embonini yezokuzijabulisa. I-3D animation isebenzisa ihluzo ezikhiqizwe yi-computer ukudala izigcawu ezibonisa ukubukeka okuhle kakhulu futhi okunengqondo. Izibonelo ze-3D animation zingatholakala kumamuvi athandwayo afana no-Frozen, Ice Age, ukuthi Uqeqesha kanjani i-Dragon yakho ne-Sin City.
Lolu hlelo luhlinzeka ngezifundo ezihlelwe kahle futhi lulungiselela abafundi ngamakhono nobuchule obudingekayo ekuphishekeleni ikhono lomsebenzi we-TV, ukukhiqizwa kwama-movie, ukugqwayiza kwegeyimu yevidiyo nezinye izimboni ezidinga ukugqwayiza kwe-3D. Izindawo zokutadisha zifaka ukubhalwa kwezindaba, ukulingiswa kwezinhlamvu, abalingiswa bokumodela nezigcawu, ukuthumela imiyalezo, imiphumela ekhethekile, ukukhanyisa, nezinhlelo zokusebenza zekhompyutha ezifana ne-Autodesk 3D Studio Max noma iMaya, i-Adobe Photoshop, i-Adobe Premiere, iZbrush ne-Adobe After Effects.
UKUSEKELWA KWAMAKHAYA | Izinyanga eziyi-14 (amahora angama-35 / isonto, kufaka ne-internship)
Abantu abaqeqeshelwe ukuxhaswa kwamakhompiyutha baphatha futhi bafake izinsiza zenethiwekhi, basebenzise kahle ukusebenza kwamakhompiyutha nezinkinga zekhompyutha zokuxazulula izinkinga. Bazokwazi ukuhlaziya ukwakhiwa kanye nokusebenza kwezinqubo zamakhompiyutha futhi bahlinzeke ngemisebenzi kumakhasimende emsebenzini.
Lolu hlelo lufundisa ukusetshenziswa okuhle kwesoftware, ukusetshenziswa kwezinhlelo zokusebenza ezindala nezisanda kwenziwa, ukusetshenziswa kwesoftware application, ukudala nokusebenzisa imininingwane yolwazi, kanye nokusetshenziswa kwezingcingo kwezokuxhumana. Izindawo zokufunda zifaka ukuphathwa kwenethiwekhi, izinhlelo ezithuthukisayo, ukufaka i-Hardware ne-software, ukuphatha ukufinyelela, ukusetha ukwabiwa kwemithombo, ukuxazulula inkinga nokwenza kahle kwe-computer.
ISIQINISEKISO SE-INTERIOR | Izinyanga eziyi-18 (amahora angama-20 / isonto, kufaka ne-internship)
Abaqambi Bangaphakathi babona ngemininingwane futhi bakhiqiza ubuhle obuhle, obusebenzayo nobuphephile bezikhala ezingaphakathi ezindlini zokuhlala, ezentengiselwano, zamasiko, zenhlangano kanye nezimboni. Amakhompyutha asetshenziselwa ukusiza ekubumbeni, ekuqhathanisheni imibala nasekuboneni kokugcina komkhiqizo.
Lolu hlelo lulungiselela abafundi ukuthi baqonde futhi bakhiqize ubuhle bemiklamo, esebenza futhi ephephile yezikhala zangaphakathi ezindlini zokuhlala, kwezohwebo, zamasiko, zezikhungo kanye nezimboni. Izindawo zokufunda zifaka ukwakheka kwezangaphakathi nomhlobiso, umbala, ukuhlelwa kwesikhala, i-CAD yemiklamo engaphakathi nabahlobisi, izindwangu nezinto zokwakha, ifenisha nezinto zokuhlobisa, ukukhanyisa kanye nemibono yokuhlala nezindawo zokuhlala.
I-MICROCOMPUTER NE-NETWORK SYSTEMS TEKNOLOGY | Izinyanga eziyi-15.5 (amahora angama-25 / isonto, kufaka ne-internship)
Abantu abaqeqeshelwe ama-microcomputer nezinhlelo zokuxhumana banikezela ngezinsizakalo zokuxazulula izinkinga kubasebenzisi benethiwekhi. Ngokuvamile banesibopho sokugcina, ukuxazulula inkinga kanye nokuphatha ukusetshenziswa kwamanethiwekhi endawo (ama-LAN), amanethiwekhi endawo ebanzi (ama-WANs) amanethiwekhi wegama lesisekelo, izindawo zokusebenza kwamakhompyutha, nokuxhumeka ku-inthanethi. Kwakuseminyakeni embalwa edlule lapho amagama we-inthanethi, i-intranet ne-extranet asetshenziswa kuphela ezindaweni ezikhethekile kakhulu. Manje bayingxenye yesilulumagama semihla ngemihla. Ukusetshenziswa kabanzi kwe-intanethi kuholele ekusetshenzisweni kwama-routers, ama-proxies, ama-firewall, i-VPN (i-Virtual Private Networks) manje sekulinganisa amafu kanye nama-virtualization. Ubuchwepheshe obusha obuvele eminyakeni embalwa edlule buye baholela emibhalweni efana neyebhizinisi ye-inthanethi njengeB2B, B2C ne-M2M. Uhlelo lwethu luhlala luvela unyaka nonyaka njengoba izinguquko eziqhubeka zanda embonini zisho ushintsho kokuqukethwe kwezifundo.
Lolu hlelo luhlinzeka ngemiyalo nokuqeqeshwa kokuthi ungayifaka kanjani, uyilungiselele futhi uyilondoloze ama-computer amancane, izinhlelo ezisebenzayo kanye nobuchwepheshe bamafu. Izindawo zokufunda zifaka ukusekelwa kobuchwepheshe, izinhlelo ezisebenza ngeLinux, amasistimu wokusebenza kwenethiwekhi, ukuphatha inethiwekhi yebhizinisi, izinhlelo ezenzelwe iMicrosoft, kanye nendawo yamafu.
Silungiselela abafundi imisebenzi efuna ubungcweti ngemikhiqizo nobuchwepheshe be-Microsoft. Ngaphezu kwalokho iHerzing College iyilungu leComputer Technology Viwanda Association (CompTia). Siphinde futhi silungiselele abafundi ubungcweti kumakhompiyutha we-microcomputer nezinhlelo zokusebenza. Ngoba ukuqinisekiswa kungokoqobo embonini yamakhompiyutha, uhlelo lweMicrocomputers and Networking Systems luqukethe izinto ezibonakalayo zeMicrosoft Certified Solutions Associate (MCSA), iCisco CCENT, iCompTia A + ne-Network +, i-CompTia Cloud Essentials neCompTia Linux + certification.
UKUGCINWA OKUFANELEKILE | Izinyanga ezingama-24 (amahora angama-25 / isonto, kufaka ne-internship)
I-Sustainable Architecture kuyindlela entsha yokwakhiwa kwezakhiwo nokwakhiwa okugxilwe kubuchwepheshe obuthuthukisiwe bokwakha, amandla avuselelekayo, kanye nokwenza ngcono ukusebenza kwamandla kwezakhiwo. Iningi lohulumeni manje selikhathazekile ngezinkinga zentuthuko esimeme nokuqwashisa ngemvelo kwabantu.
Uhlelo lweSustainable Architecture luhlomisa abafundi ukuthi bahlangabezane nezidingo zomkhakha wezokwakha jikelele futhi bahlangabezane nesidingo esikhulayo sokwamukela nokuqhamuka namasu okuthuthuka kanye nokwakha okungabonakala kalula. Izindawo zokufunda zifaka imathematics esetshenziselwe ukwakhiwa kwezakhiwo, izakhiwo zobuchwepheshe kanye nemidwebo, ukwakhiwa, ukwakhiwa kanye nokusimama kwemvelo, izinsiza zezakhiwo eziluhlaza kanye nokuphathwa kwamandla, ukuhlaziya kanye nezitatimende zokwakhiwa kwezakhiwo eziluhlaza kanye nokulawulwa kwamakhodi wokwakha nokwakha.
UKUCHWEPHESHA KOKUFUNDA NOKUKHANYA | Izinyanga eziyi-16 (amahora angama-25 / isonto, kufaka ne-internship)
Abaklami abanamakhono bahumusha imibono yonjiniyela bese beyethula ngolimi lokukhiqiza nokwakha. Esikhathini esedlule, abadwebayo ngokuyinhloko babekhiqiza imidwebo yokusebenza nezikimu besebenzisa imishini eyahlukahlukene yokubhala, imithetho, ama-T-tikwele, amajika, onxantathu, namanye amathuluzi wokudweba. Namuhla, abantu kule ndima bakhiqiza le midwebo besebenzisa uhlelo lomdwebo osizwa ikhompyutha olwaziwa ngokuthi yi-CAD.
Lolu hlelo lulungiselela abafundi ukuba babe abadwebi abanekhono abahumusha imibono yonjiniyela bese beyethula ngolimi lokukhiqiza nokwakha. Le mfundo inikela ngezindawo ezintathu ezihlukile zokufunda ongakhetha kuzo; Ithrekhi A - Ukubukwa & Ukugqwayiza ku-Design Yobunjiniyela, Ithrekhi B - Ukuklama Nokwakha Ubunjiniyela Bemishini, I-Track C - I-Architectural / Engineering / Design Design Design.
UKUJIKELELA KWAMANDLA | Izinyanga eziyi-14 (amahora angama-35 / isonto, kufaka ne-internship)
Lolu hlelo luthuthukisa amakhono adingekayo ukuthola imininingwane okufanele ifakwe kumidwebo. Izindawo zokufunda zifaka izindlela zokuthatha nokutolika, ukukhiqiza, ukutolika imininingwane yezobuchwepheshe ehlobene nezinto zokwenziwa nenqubo yokwenza, okubonisa ukuhleleka kwezakhi nezinhlelo zesitimela samandla, ukuhumusha nokwakha imidwebo kanye nemidwebo, kanye nemisebenzi ekhethekile yohlelo lokuhlelwa okusalulwa yikhompyutha.
INDLELA YOKUZIPHATHA | Izinyanga eziyi-15 (amahora angama-25 / isonto, kufaka ne-internship)
Abahlaziyi bezinhlelo bayabhala, baguqule, bahlanganise futhi bavivinye ikhodi yekhompyutha ezinhlobonhlobo zezicelo zamakhompyutha nezesoftware. Banquma uhlelo lwebhizinisi oludingekayo kohlelo lwekhompyutha. Umuntu oqeqeshiwe kule ndima futhi angaba nesibopho sokuqeqesha abasebenzi ekusebenziseni uhlelo.
IMFUNO YOKUQALA YABANTWANA | Izinyanga eziyi-14 (amahora angama-20 / isonto, kufaka phakathi ukuqeqeshwa ngaphakathi)
Izifundo zobuntwana zakuqala ukukhetha okufezwayo, kusiza ekuhlinzekeni isisekelo sokweseka ukukhuthaza izingane ukuthi zifinyelele emandleni azo aphelele. Labo abanesifiso sokuphishekela lomsebenzi, kufanele bajabulele ukuhlela nokwenza imisebenzi yokuzijabulisa yezingane ezincane, kuzenze zikwazi ukuhlangana zibe ngamaqembu nomphakathi omkhulu. Ukuxhumana okunokuzwela kuyadingeka ukusungula ubudlelwane obakhelwe ethembeni nasekuthuthukiseni amakhono abo wobuciko.
Lolu hlelo luhlinzeka ngokuqeqeshwa kokunakekelwa nokuholwa kwezingane zasenkulisa ngaphansi kokuqondisa kwabafundisi bezingane abasebancane, ukukhuthaza nokuthuthukisa ukukhula kwabo ngokwengqondo, ngokomzimba nangokomzwelo. Izindawo zokutadisha zibandakanya izisekelo ze-psychology yokuqala yabantwana, ukuphepha kwengane kanye nokulawulwa kwengozi, ukungenelela kokuziphatha, amasu, ukuthuthuka komphakathi kanye nemicimbi yokufundisa.
Uqede ngempumelelo i-BLI English level 9 noma i-BLI French level 8 (i-BLI French level 6 yezinhlelo ze-DEP)